Android मा WhatsApp अपडेट गर्नुहोस्, कसरी नयाँ संस्करण (२०२१) नि: शुल्क पाउन Androidsis
अनुप्रयोगहरूलाई उनीहरूको भर्खरको संस्करणमा अपडेट राख्नु सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जहाँसम्म, केहि प्रयोगकर्ताहरू सम्भावित अपरेटिंग समस्याहरूको कारण अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक गर्ने कुरामा शंका गर्दैनन्। अरुसँग एप्लिकेसन अपडेट छैन साधारण अज्ञानताको कारण, त्यसैले हामी तपाईलाई सबै कुरा सिकाउन जाँदैछौं जुन तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ व्हाट्सएप अपडेट गर्नुहोस्.
पक्कै पनि तपाईं चाहानुहुन्छ ती मध्ये एक हो नि: शुल्क व्हाट्सएप स्थापना गर्नुहोस् जतिसक्दो चाँडो मोबाइल एकदम नयाँ छ, त्यसकारण, यो पछिल्लो हुनु महत्वपूर्ण छ व्हाट्सएपको अपडेट संस्करण, मात्र किनभने हामी प्रत्येक विशेष संस्करणमा समावेश गरिएको समाचारहरू हराइरहेका छौं, तर अपडेटले सुरक्षा स्तरमा समाचार पनि ल्याउँदछ, र गोपनीयता महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी जब हामी एन्ड्रोइडमा भाइरसहरू बचत गर्न चाहान्छौं विशेष गरी जब हामीलाई समावेश गर्दछ। व्हाट्सएपमा विज्ञापन।
1 Android मा WhatsApp अपडेट कसरी गर्ने
2 म व्हाट्सएप अपडेट गर्न सक्दिन
2.1 ठाउँको अभावले म व्हाट्सएप अपडेट गर्न सक्दिन
3 नि: शुल्क व्हाट्सएप कसरी अपडेट गर्ने
4 WhatsApp प्लस अपडेट गर्नुहोस्
5 व्हाट्सएप अपडेट हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ?
6 WhatsApp वेब अपडेट कसरी गर्ने
7 कसरी बीटा परीक्षक हुन र व्हाट्सएप को नवीनतम संस्करण को परीक्षा?
8 गुगल प्ले बिना नै APK संग WhatsApp कसरी अपडेट गर्ने
9 के स्वचालित WhatsApp अपडेटहरू सक्रिय गर्न सकिन्छ?
Android मा WhatsApp अपडेट कसरी गर्ने
एन्ड्रोइड केस एकदम समान छ, साधारण गुगल प्ले प्रवेश गर्दै भण्डार हामी अनुप्रयोग अपडेट गर्न सक्दछौं, किनकी पहिलो पृष्ठले हामीलाई देखाउँनेछ कि कुन अनुप्रयोगहरूको अपडेट उपलब्ध छ र जहाँ तपाईं एन्ड्रोइडका लागि व्हाट्सएप अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ।
अवश्य पनि APK हरु डाउनलोड गर्नुहोस् यो कुनै पनि सामान्य स्रोतहरूबाट सम्भव छ, यदि हामी यसलाई स्थापित गर्छौं भने यो अपडेट हुनेछ।
म व्हाट्सएप अपडेट गर्न सक्दिन
हामी किन प्लेटफर्म प्रयोग गर्दैछौं त्यसमा निर्भर भएर हामी किन WhatsApp अपडेट गर्न सक्षम हुँदैनौं भन्नेका थुप्रै कारणहरू छन्। एन्ड्रोइड को मामला मा, हामी किन हामी एक प्राप्त को सबै भन्दा लोकप्रिय कारणहरु को लागी जानेछौं Whastapp अद्यावधिक गर्दा त्रुटि:
यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ भने त्रुटि कोड 413१481, 491 492१, 921 927 १, 941 XNUMX २, XNUMX २१, २ XNUMX or वा XNUMX XNUMX१, निम्न गर्नुहोस्:
तपाईंको गुगल खाता मेटाउनुहोस्: जानुहोस् सेटिंग्स > खाताहरू > गुगल > तपाइँको खाता छान्नुहोस् र हटाउनुहोस्
तपाईंको गुगल खाता पुन: उपकरण थप्नको लागि तपाईंको उपकरण पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
अनुप्रयोग क्यास खाली गर्नुहोस्: सेटिंग्स> अनुप्रयोगहरू> गुगल प्ले स्टोर> क्यास खाली गर्नुहोस् र डाटा खाली गर्नुहोस्।
ठाउँको अभावले म व्हाट्सएप अपडेट गर्न सक्दिन
यदि तपाईं १०१, 101 498 or वा 910 १० त्रुटि भेट्नुभयो भने यसलाई "पर्याप्त भण्डारण ठाउँ छैन", यसका लागि पहिलो चरण क्यास खाली गर्नु हो जुन हामीले पहिले दर्साइसकेका छौं। यदि तपाईं अझै पनी सक्नुहुन्न भने, तपाईंसँग उपकरणको भण्डारण भित्र निम्न खण्डहरूमा भेटिएका फाइलहरू मेटाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन:
भिडियोहरूको फोल्डर अवस्थित छ: / वाट्सएप / मिडिया / वाट्सएप भिडियो / पठाइएको।
छवि फोल्डर अवस्थित छ: / वाट्सएप / मिडिया / वाट्सएप छवि / पठाईएको।
भ्वाइस सन्देश फोल्डर यसमा अवस्थित छ: / व्हाट्सएप / मिडिया / व्हाट्सएप भ्वाईस नोट्स।
सामान्य त्रुटिहरूको अर्को "को त्रुटि होअवैध प्याकेज फाइल ", यसको लागि हामीले व्हाट्सएप .apk सिधा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ अनुप्रयोगको आधिकारिक वेबसाइटबाट, त्यसो भए हामी एन्ड्रोइड सेटिंग्समा जानेछौं, "सुरक्षा" मा नेभिगेट गर्न र त्यहाँ एक पटक, हामी सक्रिय गर्नेछौं "अज्ञात स्रोतहरू"। अब हामी डाउनलोड फोल्डरमा फर्केर जानेछौं र यसको नयाँ संस्करणमा फेरि व्हाट्सएप स्थापना गर्नुपर्नेछ।
नि: शुल्क व्हाट्सएप कसरी अपडेट गर्ने
कुनै समस्या छैन, जुनसुकै विधि प्रयोग गर्नुहोस्, व्हाट्सएप पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ, त्यसैले चिन्ता नलिनुहोस्, नि: शुल्क व्हाट्सएप नवीकरण गर्नुहोस् यो पनि एक सम्भावना हो, त्यसैले कुनै पनि अपडेटको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस्, व्हाट्सएप सेवा जीवनको लागि निःशुल्क हुनेछ।
त्यसकारण, हामी तपाईंलाई सम्झना गराउँछौं कि तपाईंलाई कुनै पनि प्रदायकको बारे शंकास्पद हुनुपर्दछ जसले तपाईंलाई व्हाट्सएप्प सदस्यताका लागि विनिमयमा भुक्तानी गर्ने प्रयास गर्दछ, किनकि हामी यो निश्चित गर्न सक्दछौं कि एप्लिकेसन र यसको प्रयोग पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छ, हाम्रो अपरेटरलाई भुक्तान बाहिर। हाम्रो डाटा योजना को लागी।
WhatsApp प्लस अपडेट गर्नुहोस्
व्हाट्सएप परिमार्जन को मामला मा, हामी डाउनलोड को लागी जानु पर्छ .एपके व्हाट्सएप प्लस को यसलाई नविकरण गर्न सक्षम हुनु। तसर्थ, व्हाट्सएप प्लस अपडेट गर्न हामी प्रदायकमा जानुपर्नेछ, व्हाट्सएप परिमार्जनको नयाँ उपलब्ध संस्करण पुन: डाउनलोड गर्नुहोस् र विकासकर्ताका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यस लि In्कमा हामी सबै संस्करणहरू र पाठ्यक्रमहरू व्हाट्सएप प्लसको पछिल्लो अपडेटहरू फेला पार्नेछौं, त्यसैले हामीले केवल .apk डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र यसलाई पहिले नै स्थापना गरिएको WhatsApp प्लसको माथि स्थापना गर्नुपर्नेछ।
निस्सन्देह, व्हाट्सएप एक द्रुत मेसेजिंग अनुप्रयोग बनेको छ जुन लाखौं मानिसहरूले आफ्नो दिन प्रतिदिन प्रयोग गर्छन्, त्यसैले यो आवश्यक छ कि तपाईं सक्षम हुनु whatsapp अपडेट गर्नुहोस् पछिल्लो संस्करणमा, किनकि यसले तपाईंलाई प्रदर्शन सुधार, नयाँ कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ र सम्भावित सुरक्षा समस्याहरू समाधान गर्दछ जसले तपाईंको गोपनीयतालाई जोखिममा राख्न सक्छ।
व्हाट्सएप अपडेट हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ?
जहिले पनि WhatsApp अद्यावधिक गरिएको छ। मेसेजिंग अनुप्रयोगले सुधारको श्रृंखला प्रस्तुत गर्दछ जस्तै नयाँ प्रकार्यहरू। जबकि त्यहाँ अपरेशन वा सुरक्षा मा सुधारहरु हुन सक्छ। त्यसकारण, जब यस्तो नयाँ संस्करण उपलब्ध छ, यो अपडेट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन यो महत्वपूर्ण छ अनुप्रयोगलाई अद्यावधिक राख्नुहोस्। एकातिर, सबै नयाँ कार्यहरू र यसमा आउने सुधारहरूको पहुँच गर्न। अद्यावधिक नभएको खण्डमा, तपाईं ती आनन्द लिन सक्नुहुन्न। र धेरै नयाँ सुविधाहरूले तपाईंलाई व्हाट्सएपको उत्तम प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
अर्कोतर्फ, हामीले भनेजस्तै, सुरक्षा सुधारहरू पनि प्रस्तुत गरियो। यस तरीकाले, नयाँ संस्करणको साथ, तपाई आफैंको रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ सम्भावित खतराहरूको बिरूद्ध। यसैले, तपाईंको एन्ड्रोइड फोन सम्भावित हमलाहरू, भाइरसहरू वा अन्य कुनै खतरामा कम जोखिमपूर्ण छ। यस प्रकारको परिस्थितिमा अनुप्रयोग हाम्रो फोनको गेटवे हुन सक्छ।
गुगल प्लेबाट तपाईं व्हाट्सएप अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ, अनुप्रयोग प्रोफाइल खोज्दै। तपाईको एन्ड्रोइड फोनबाट पनि अनुप्रयोगको खोजीमा अनुप्रयोगको खोजी गर्नुहोस् र अपडेटका लागि खोजीमा बल गर्नुहोस्। यद्यपि अधिक अपडेटहरू प्राय: स्वचालित हुन्छन्। त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई केहि पनि गर्नुपर्दैन।
WhatsApp वेब अपडेट कसरी गर्ने
कम्प्युटरको लागि व्हाट्सएपको आफ्नै संस्करण छ, कल व्हाट्सएप वेब। स्मार्टफोनका लागि संस्करणको रूपमा यो नयाँ प्रकार्यहरूसँग अद्यावधिक हुन्छ। यद्यपि धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई यस संस्करणको अद्यावधिक कसरी गर्ने थाहा छैन।
सामान्यतया, जब एक अद्यावधिक उपलब्ध हुन्छ, तपाईं एक सूचना प्राप्त गर्न लाग्नुभएको छ। त्यसोभए सामान्य कुरा भनेको तपाईंले स्क्रिनमा देखा पर्ने लिंकमा क्लिक गर्नुपर्दछ। यस प्रकार, तपाईंसँग पहिले नै यो संस्करणको अपडेटमा पहुँच छ। तर, यदि यो विधिले काम गर्दैन वा तपाईंले यो सूचना प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, त्यहाँ अर्को, धेरै सरल र छिटो तरीकाबाट यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तपाईंले प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ अर्को पाना। यससँग तपाईंको फोन जोडा बनाउनुहोस् र फोनमा अनुप्रयोग खोल्नुहोस्। वेबमा तपाइँले एक QR कोड प्राप्त गर्नुभयो, कि तपाईं यो आफ्नो फोन संग पढ्नु पर्छ। यसले तुरुन्तै व्हाट्सएप वेब अपडेट गर्दछ। अब तपाई नयाँ संस्करणको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
कसरी बीटा परीक्षक हुन र व्हाट्सएप को नवीनतम संस्करण को परीक्षा?
व्हाट्सएपसँग बीटा संस्करण छ, जसले तपाइँलाई सबै नयाँ कार्यहरू प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिनेछ जुन अरू कसैसँग यसमा आउँदछ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ अनुप्रयोगको बीटा परीक्षक बन्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न सक्षम हुनु वास्तवमै केहि सरल छ। त्यहाँ पछ्याउन केहि चरणहरू छन्।
पहिले तपाईंले व्हाट्सएप बीटा पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, जुन तपाईंले पहुँच गर्नुपर्नेछ यो लिंक। भित्रमा, तपाईंलाई तपाईंको गुगल खातामा लग इन गर्न सोधिनेछ। त्यसो भए यो पर्दामा देखा पर्नेछ "परीक्षक बन्नुहोस्" भन्ने बटन। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको त्यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यस तरिकाबाट, तपाईं पहिले नै बीटा परीक्षक हुनुहुन्छ।
जब तपाईले यो कार्य गर्नु भएको हुन्छ, तपाईले भर्खरको भर्खरको संस्करण डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए Play Store मा जानुहोस्। त्यहाँ, वाट्सएप प्रोफाइलमा, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि तपाई पहिले नै बिटा टेस्टर हुनुहुन्छ, अनुप्रयोगको नाम अन्तर्गत। अनुसरण गर्दै तपाईको फोनमा अनुप्रयोग अपडेट गर्नुहोस् एन्ड्रोइड। यी चरणहरूको साथ तपाईं पहिले नै बीटा परीक्षक हुनुहुन्छ र तपाईं सन्देशहरू अनुप्रयोगमा आउने यी समाचारहरू परीक्षण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
गुगल प्ले बिना नै APK संग WhatsApp कसरी अपडेट गर्ने
तपाईंसँग WhatsApp APK हुन सक्छ, जुन तपाईंले गुगल प्ले बाहिर डाउनलोड गर्नुभएको छ। यो सम्भव छ प्रयोगकर्ताहरूका लागि जसको फोन समर्थित छैन। यस अवस्थामा, अनुप्रयोग अपडेट गर्ने प्रक्रिया केही फरक छ।
हामीसँग गुगल प्लेमा सँधै फाइलको पहुँच छैन। भाग्यवस, व्हाट्सएप आफैंले हामीलाई प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। उसको वेब पृष्ठमा हामीसँग एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि सेक्शन छ, जुन तपाईं मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क। यो जहाँ तपाईं एपीके डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी अनुप्रयोगको सबैभन्दा भर्खरको संस्करणको वाट्सएप एपीके पाउँछौं। तसर्थ, तपाईको फोनमा फाईल डाउनलोड गर्नुहोस् एन्ड्रोइड र यसलाई त्यसरी अपडेट गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। यदि तपाईंसँग अपरेटिंग प्रणालीको पुरानो संस्करण छ, जुन उदाहरणको लागि अब Google Play लाई समर्थन गर्दैन, यो उत्तम तरिका हो। सुरक्षित हुनुको अलावा
के स्वचालित WhatsApp अपडेटहरू सक्रिय गर्न सकिन्छ?
जब तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा व्हाट्सएप स्थापना गर्नुहुन्छ, अनुप्रयोग सामान्यतया स्वचालित अपडेटको साथ आउँदछ। यो तपाईंको मामलामा केस नहुन सक्छ, वा यो कुनै खास बिन्दुमा तपाईंले यसलाई भिन्न तरिकाले कन्फिगर गर्नुभयो। स्वचालित अपडेटको फाइदा यो हो कि तपाईले केहि गर्नुपर्दैन। तसर्थ, यदि तपाईं तिनीहरूलाई सक्रिय गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो धेरै सरल छ।
तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा प्ले स्टोर अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुहोस्। अर्को, बायाँ मेनू प्रदर्शन गर्नुहोस् र पहिलो खण्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्, जसलाई "भनिन्छ"मेरो अनुप्रयोग र खेलहरू"। अर्को, माथिल्लो ट्याबहरूबाट, स्थापितमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंको फोनमा भएका अनुप्रयोगहरू सूचीमा प्रदर्शित हुनेछन्।
त्यो सूचीमा व्हाट्सएप खोज्नुहोस् र प्रविष्ट गर्नुहोस्। एक पटक अनुप्रयोगको प्रोफाइल भित्र, स्क्रिनको माथि दायाँ देखा पर्ने तीन ठाडो थोप्लाहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, स्क्रिनमा धेरै विकल्पहरू देखा पर्दछन्। अन्तिम एक स्वचालित अपडेट हो। यदि वर्ग खाली छ भने, थिच्नुहोस् र हरियो प्रतीक देखा पर्नेछ।
यस तरीकाले, तपाईंसँग छ व्हाट्सएप को सक्रिय स्वचालित अपडेट। अर्को पटक अनुप्रयोगसँग अद्यावधिक उपलब्ध छ, तपाईंले केहि पनि गर्नुपर्दैन। यो स्वतः अपडेट हुनेछ।